Ukusilela kuluntu: Iyintoni, imizekelo, indlela esisichaphazela ngayo | Ezezimali
Elinye lamagama aviwayo kakhulu malunga nelizwe lelo lokusilela koluntu. Ayilunganga le nto ukuba iphezulu kakhulu, kuba iyakubonisa ukuba inkcitho ingaphezulu kwengeniso elizweni, eneziphumo ezibi.
Kodwa, Yintoni ngokwenene intsilelo yoluntu? Njengoko kulinganiswe? Isichaphazela njani? Ukuba uzibuze konke oku, ngokulandelayo siza kugxila kwesi salathisi esinceda ukwazi ukuba ilizwe liqhuba kakuhle okanye kukho iingxaki kuqoqosho lwalo.
1 Yintoni intsilelo yoluntu
1.1 Ukusilela koluntu eSpain
1.2 Intsilelo yoluntu kunye netyala loluntu
2 Ibalwa njani
3 Uyifumana njani imali
4 Indlela intsilelo yoluntu esichaphazela ngayo
Yintoni intsilelo yoluntu
Eyona ndlela ilula yokuchaza intsilelo yoluntu ngumzekelo. Khawufane ucinge ukuba ilizwe liqala ukuchitha ngaphezulu kokungena kwalo. Umzekelo, ukuba ufaka i-1 yezigidi ze-euro, iindleko zakho zizigidi ezi-2. Oko Inkcitho eyongezelelweyo ithetha ukuba unamatyala, kwaye kufuneka uhlawule abo banetyala lemali, ke sebenzisa izixhobo ukunyusa loo mali, nokuba kungokubolekwa kwemali okanye ngezinye iifomula. Kodwa ukuba inkcitho ihlala iphezulu, ayisokuze ikwazi ukuyiphelisa intsilelo yayo kwaye, ekuhambeni kwexesha, ilizwe liya lihlwempu kwaye kuya kusiba nzima ukufumana imali.
Ixesha elichaseneyo liya kuba yintsalela yoluntu, oko kuthetha ukuba umvuzo uphezulu kuneendleko, oko kukuthi, unemali oyichithayo okanye oyityalayo. Inyani yile yokuba akukho lula ukufumana imizekelo yoku, kodwa kukho amazwe anentsilelo yoluntu ephantsi kakhulu.
Ukusilela koluntu eSpain
Kwimeko yeSpain, ukusilela koluntu kuphezulu kakhulu. Ngokutsho Idatha ye-2020, i-10,97% ye-GDP yafikelelwa, leyo, xa siyithelekisa namanye amazwe, ngaloo nyaka sasikwindawo ye-175 kumazwe ayi-190.
Kubandakanya ntoni oko? Ewe, siphakathi kwezikhundla zokugqibela kwimeko enengxaki. Sihambile ekubeni nentsilelo yezigidi ezingama-35637, 123072 saya kusilela nge-XNUMX yezigidi, nto leyo ebilulwando olukhulu, ngokuyinxenye olwenziwe mandundu yingxaki yesifo.
Intsilelo yoluntu kunye netyala loluntu
Uninzi aluchanekanga ukucinga ukuba intsilelo yoluntu kunye namatyala oluntu ayafana, kanti enyanisweni akunjalo. Umahluko omkhulu phakathi kwala magama mabini kukuba Ukusilela koluntu kuthathwa njengokuguquguquka kokuhambaNgelixa ityala loluntu liya kuba kukungafani kwesitokhwe.
Kuthetha ntoni oku? Ewe, intsilelo yoluntu ngumahluko phakathi kwengeniso kunye nenkcitho ngexesha elinikiweyo; Ngelixa ityala loluntu liyakuba sisixa semali esiqokelelweyo esenzelwe ukuhlawula intsilelo yoluntu. Ngamanye amagama, yile nto ityalwa abanye abasibolekileyo ukuze sikwazi ukuhlangabezana nokuhlawulwa kweendleko ezongezelelweyo abanazo.
Xa kubalwa ukusilela koluntu, kukho izalathi ezithathu ezibaluleke kakhulu ezinefuthe: ingeniso yelizwe, inkcitho yoku, kunye ne-GDP. Zonke kufuneka zisekwe ixesha elifanayo, elihlala lingunyaka omnye.
Ifomula iya kuba yile ilandelayo:
Ukusilela koluntu = umvuzo - inkcitho.
Ngoku, kutheni iGDP kufuneka ithathelwe ingqalelo? Kuba unokwenza umthetho wesithathu. Ukuba i-100% iyakuba yi-GDP, intsilelo yoluntu iyakuba yi-x% ye-GDP. Umzekelo, khawufane ucinge ukuba une-1000000 GDP, kwaye ukusilela kwakho esidlangalaleni kube yi-100000.
Ngalo mthetho wesithathu, intsilelo yoluntu iyakuba yi-10% ye-GDP.
Uyifumana njani imali
Ilizwe lineendlela zokuxhasa ngezemali intsilelo yoluntu. Phakathi kwazo kukho:
Ukunyusa irhafu. Injongo yakho kukunyusa imali eninzi ukuhlawula iindleko zakho. Ingxaki kukuba oku kuwela ngokuthe ngqo kubemi belizwe, nto leyo ethetha ukuba baphulukana nemali engaphezulu kwaye umgangatho wobomi wabo uyasokola. Ngesi sizathu, uninzi luthatha isigqibo sokulishiya ilizwe.
Khupha imali eninzi. Oku akuqhelekanga kuba kuya kuthetha ukuba kukho ukwehla kwemali, kwaye ayilunganga, kodwa yindlela esetyenziswa kumazwe angaphucukanga.
Khupha ityala loluntu. Yeyona nto yenziwa kakhulu. Imalunga nokubeka iibhondi zikarhulumente kunye namatyala karhulumente kurhwebo ukuze abatyali mali bakwazi ukuzithenga kwaye, ngenxa yoko, bafumane imali yokuhlawula amatyala abo. Ingxaki kukuba, ukuba iya isiba nkulu, ekugqibeleni akunakwenzeka ukuba ubuyise imali "ebibolekiwe".
Nayiphi na kwezi ndlela inokuba neziphumo ezibi kumacandelo ezoqoqosho; Ke ngoko, isigqibo kufuneka sithathwe ngendlela efundwe kakhulu ukuze ungonzakalisi ngaphezulu.
Indlela intsilelo yoluntu esichaphazela ngayo
Ukuqonda ukusilela koluntu akukho nto ingcono kunomzekelo. Khawufane ucinge ukuba unomvuzo wenyanga we-1000 euros. Kwaye ezinye iindleko ze-euro ezingama-2000. Oko kuthetha ukuba unetyala le-1000 euros, ongenayo, i-inshurensi, ukutya, njl. Ke, into oyenzayo ubuza umhlobo, isihlobo, ezo 1000 zeeruro.
Kwinyanga elandelayo, buyela kwinto enye, kwaye ubuze loo mntu enye i-euro ezingama-1000. Oko kuthetha ukuba sele unetyala kuye i2000, kodwa kuthekani ukuba bekukho nomdla? Ingangaphezulu. Ukuba oku kuyaqhubeka, ekugqibeleni uyakumtyala isixa esikhulu semali ongenakukwazi ukusihlawula ngoba, ukuba uqhubeka usenza njalo, awuyi kunciphisa inkcitho, kwaye ukuba awufuni mvuzo ungaphezulu, Andisoze ndigqibe ukuhlawula ityala.
Kuya kubandakanya ntoni? Ewe, kuya kubakho ixesha apho loo mntu angaphinde ahlawule ngaphezulu. Awunakho ukuhlawula nabani na, kuya kufuneka utshintshe indlela ophila ngayo ukuze uphile, uye kokubi ngakumbi, okwexeshana.
Kulungile Kuyafana nokwenzeka kumazwe xa ukusilela koluntu kuphezulu kakhulu; umgangatho wobomi babantu uyachaphazeleka kwaye ilizwe liya lisanda ngokwamatyala, lifika ngexesha apho lingenakuqhubeka khona, kwaye kulapho ke kufuneka bayihlangule (okanye bayeke ife).
Nangona zininzi izinto kwaye yonke into ayinabunzima kangako, unayo into yokuqala esondeleyo yokusilela koluntu nokuba kuthetha ntoni na kwilizwe ukuba liphezulu kakhulu. Ke ngoko, enye yeenjongo zikaRhulumente kufuneka ibe kukunciphisa kangangoko kunokwenzeka, kwaye ngokukhawuleza okukhulu, ukuthintela iingxaki kunye neziphumo eziphambili ezingayi kuba ntle nakweyiphi na imeko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » I ngxaki » Intsilelo yoluntu